Abakhiqizi Bomshini Wokumaka Emigwaqweni | I-China Road Marking Machine Factory & Abahlinzeki
—Umshini Wokumaka Emgwaqweni ——
200HS Cold Plastic Ikani Machine, MMA 1: 1, elixutshwe Ngaphakathi
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yomshini obandayo weplastiki owenziwe ngaphakathi. uhlelo lokunciphisa ukushaqeka oluthuthukile, idivaysi engasindi elungisiwe yombhobho, umbhobho ongenisiwe, isistimu yokupholisa eqhubekayo, Ingxenye B yedivayisi yokuxuba i-Static kanye nedivayisi yokuhlanza esheshayo ezenzakalelayo, njll.
Umshini Wokumaka Umgwaqo ongu-250DC
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yemishini yokumaka yomgwaqo ezizihambelayo. Ifaneleke kakhulu ezikhumulweni zezindiza, komasipala, opharetha, noma kunoma ngubani odinga amaphuzu avelele noma eminye imigqa enemibala emibili. Ngokufafaza ngasikhathi sinye imibala emibili kuphethini, ukukhiqizwa nokuguquguquka kokumakwa kuchazwe kabusha, futhi ububanzi obukhulu bephethini bufinyelela kuma-90 cm.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri ye ……
Umshini wokumaka uhlobo lomgwaqo we-plastic-Spotline ebandayo
Umshini Wokumaka Umgwaqo we-LXD
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yemishini yokumaka yomgwaqo enezingxenye ezimbili. Ineziqukathi ezimbili zokupenda u-A namaphoyinti B, okungaxubaniswa ndawonye ngokushukumisa ucingo. idivayisi evuselelayo ingazinyakazisa ngokuzenzekelayo, esekelwa amandla eselula.
Umshini Wokumaka Umgwaqo Oyi-Component Rib Line
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yemishini yokumaka yomgwaqo enezinto ezimbili. Irabha yerabha: amasondo wensimbi, injoloba emelana nokushisa, Isondo langemuva lomsila linendawo yokuma, ukuyenza ihambe ngomugqa oqondile. Ukucushwa Okuyinhloko: Iyunithi yokushayela yokuhamba eyi-1-i-USA2 i-Solenoid valve-Italy3 Isilawuli somoya-i-Taiwan4 modulator-Germany5 Isilinda somoya-Italy
Umshini we-200HS Two Compray Road Spray Machine
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yemishini yokufafaza yomgwaqo enezingxenye ezimbili. ukumiswa main: futha kabili, wokubacindezela injini uhlelo lokushayela, eqhubekayo transmission system.
Umshini Omabili Wokumaka Umgwaqo Wendlela Egcwele, Umugqa Wephrofayili Futhi Umugqa Wama-Agglomerate
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yomshini wokumaka umgwaqo onezigaba ezimbili womugqa oyisicaba. Isondo lerabha: isondo lensimbi, iraba elenzelwe ukushisa elenzelwe ukushisa, Isondo langemuva lomsila linikezwa nge-locator, gcina umshini uhamba ulayini oqondile.
I-Truck egibele umshini we-Spray Spray Machine
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yemishini efafaza amaloli enezinto ezimbili. Uhlelo lweRoadLazer RoadPak luhlelo lokuqhafaza olumanzi olwakhelwe usonkontileka osebenza kahle wokuqhafaza umgwaqo. Ngohlelo lwe-RoadPak olungenawo umoya, ungazuza imigqa enembile ngokwejubane elikhiqiza kakhulu - kufika ku-10 mph (16 km / h).